﻿ आज वुहानमा रहेका विद्यार्थीलाई स्वदेश ल्याइदै, विमानस्थल १२ घण्टा अवरुद्ध हुने
काठमाडौं । सरकारले चीनको कोरोना प्रभावित क्षेत्र वुहानलगायतका स्थानमा रहेका नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि आज (शनिबार) विमान पठाउने भएको छ । पाकिस्तानी पाइलटको कमान्डमा नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी ए–३३० जहाज आज दिउँसो पौने तीन बजे त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको अनुसार चीनबाट आइतबार राति साढे २ बजे फिर्ता हुने सेड्युल तय भएको छ । हुवेई प्रान्तका विभिन्‍न शहरबाट १ सय ८५ नेपाली विद्यार्थी स्वदेश फर्कने भएका छन् ।
चीन जाने विमान चालक र अन्य कर्मचारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विशेष तालिम दिइसकेको छ ।
चीन जाने टोलीमा तीनजना विमान चालक, ६ जना क्याबिन क्रू, दुईजना इन्जिनियर, १(१ जना फ्लाइट डिस्प्याचर र लोड मास्टरसहित नेपाली सेनाका चारजना चिकित्सक रहनेछन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले तोकेको मापदण्डबमोजिम संक्रमित स्थानबाट ल्याइने जहाज अवतरणका बेला ‘एयरक्राफ्ट डिसइन्फेक्सन’ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैका लागि शनिवार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कम्तीमा १२ घण्टा अवरुद्ध समेत हुने भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालका अनुसार सरकारले जहाजबाट यात्रुलाई कसरी ओराल्ने ? पहिलो परीक्षण कसरी र कहाँ गर्ने ? त्यहाँबाट क्वारेन्टाइनमा लगेपछि कसरी राख्ने आदी विषयमा पूर्व तयारी गरिसकेको छ । साथै विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारीले कार्यस्थलमा मास्क, पञ्जा, आवश्यकताअनुसार अन्य स्वास्थ्य सावधानीका उपाय अवलम्बन गर्नेछन् ।